Qubanaha » Gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida dalka Belgium oo hambalyo u diray madaxweyne Mahammed Abdulaahi farmaajo.
Gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida dalka Belgium oo hambalyo u diray madaxweyne Mahammed Abdulaahi farmaajo.
Gudoomiyaha jaaliyada Somaliyeed ee dalka Belgium Mudane Mohammed Awad Abbas, ayaa hambalyo iyo bogaadin u Diray Madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Abdulaahi Farmaajo oo maanta lagu doortay magaalada Muqdisho ee Caasimadda Dalka.
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida dalka Belgium ayaa ku Baaqay “Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya waa guul taariikhi ah oo u soo hoyatey shacabka Soomaaliyeed Waxay tani qeyb ka tahay horumarada dalka uu ku tilaabsanayo loona baahanyahay in la sii xoojiyo, Hambalyo ayaan leenahay aniga iyo shacabka ku nool dalka Belgium Madaxweyne Maxamed Abdulaahi Farmaajo. Xilka culus ee loo doortay allaha kaa dhigo kii ka soo baxa horumar gaarsiiya dalka” Ayuu Yiri Muddane Abbas.
Oo Sii wata hadalkiisa ayaa sheegay xiriir wax wadaqabad iyo mid wadashaqeyn wanagsan in ay soo wadamartay Muddane Farmaajo. oo aan ku kalsoonahay inuu yahay nin ka soo baxaya xilka iyo masuuliyada Loo doortay. Waan mid ay ku faraxsanyihiin Bulshada reer Belgium, horumarada laga gaaray geedi socodka siyaasadda Soomaaliya, waxayna umadda soomaaliyeed ay la qeyb sanayaan horumaradaasi ayna ku boorinayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed in ay u istaagaan sidii dalkani loo gaarsiin lahaa Xasilooni amni iyo mid siyaasadeed.
“Tani waa Guulaha taariikhiga ah ee uu dalku galayo waxaana rajeyneynaa hadduu Alle idmo inay sidaas isu dabo socoto, dowladdanina ay noqoto middii Soomaaliya ay uga baxeysay dhibaatooyinkii faraha badnaa ee soo gaaray, horumarka jirana dhammeystiri lahayd” ayuu yiri Muddane Mohammed Awed Abbas.
Gudoomiyaha ayaa ugu dambeyn ugu baaqey maamulkan cusub ee Dowladda federalka inuu kaalinta kaga aaddan ka qaato hadey noqoto (SV-CIBO.vzw, European Union and international community) Hannaanka dalka looga samata bixinayo dhibaatooyinkii soo gaaray.
“Waxaan filayaa Dowladdani inay tahay mid aad loogu kalsoon yahay madaxweyne Farmaajo , waxaan hubaa inuu noqon doono mid ku tallaabsada in isbedel uu Soomaliya gaarsiiyo iyo xasilooni siyaasadeed hadduu Alle idmo” ayuu Hadalkiisa Sii raaciyay Gudoomiyaha Jaaliyada Somaalida Belgium Muddane Mohammed Awad Abbas.